Okwu Mmalite Lathe: 16dị 16 nke Igwe Lathe - TSINFA
Lathe bụ otu n'ime igwe akụrụngwa kachasị n'ọtụtụ ebe na nhazi igwe. E nwere ụdị igwe dị iche iche. O siri ike nye ndị na-amaghị ụlọ ọrụ a iji mee ka ọdịiche dị n'etiti ụdị igwe dị iche iche doo anya. N'akwụkwọ a, anyị na-ekewa site na usoro 6 dị n'okpuru: ọnọdụ nchịkwa, usoro igwe, ojiji, ihe nhazi, ọnụ ọgụgụ nke ndị na-ebu ngwá ọrụ, ụdị akụkụ igwe. Ọ bụ ezie na ụdị aha lathe dị iche iche, enwere okwu obe, dịka oghere bed lathe igwe nwekwara ntanetị lathe, eriri eriri lathe nwekwaraCNC lathe igwe, ma ọ dịghị emetụta nghọta anyị banyere lathe.
Introductiondị okwu mmalite nke igwe lathe:
Dịka usoro njikwa
Dị ka igwe ahụ si dị
Dị ka nzube nke igwe ahụ si dị
Crankshaft lathe, camshaft lathe, wheel lathe, axle lathe, mpịakọta lathe na ingot lathe, mbịne na-egwe ọka igwe ngwá ọrụ, wheelset lathe, pipe pipe lathe
Dika ihe eji edozi ya
Igwe na-egbu osisi
Nkewa site na ọnụ ọgụgụ nke ndị na-ejide ngwá ọrụ
Onye na-ejide ngwa ọrụ CNC lathe, onye na-ejide ngwa ọrụ CNC lathe
Nkewa site n'ụdị nke akụkụ akụkụ igwe
Chuck ụdị CNC lathe, n'elu CNC lathe
Ka ọ dị ugbu a, e nwere ụzọ njikwa abụọ maka lathe, otu bụ njikwa aka, nke ọzọ bụ njikwa mmemme CNC. Dị ka usoro nchịkwa dị iche iche si dị, e kewara lathe ahụ n'ime lathe na CNC lathe.
Igwe n'ozuzu ya nwere ihe nhazi sara mbara, nhazi mgbanwe nke ntụgharị ntụgharị na ntinye ego buru ibu. Enwere ike ịhazi ihu na ime elu, ihu ihu, na eriri dị n'ime na nke mpụga nke mpempe akwụkwọ. Typedị lathe a bụ nke kachasị onye ọrụ aka. Ọ dị mfe ịrụ ọrụ. Na mbido mbụ, a na-agba ọsọ ọsọ, a na-akwagharị gia, na-ebuli onye na-amalite ihe, mgbe ahụ ọ andụ na-aga n'ihu. Ngwá ọrụ ntụgharị na-aga n'ihu, azụ na-adọta, ngwá ọrụ ntụgharị na-alaghachi n'aka ekpe, na ngwaọrụ ntụgharị na-aga n'aka ekpe. Aka ekpe na aka nri bu otu. Ọ bụ ezie na ọrụ nke ụgbọ ala izugbe dị mfe, nhazi nke akụkụ ahụ bụ ọrụ ọrụ aka, ndị ọrụ ga-elele ngwaọrụ ndị atụ na eserese maka nhazi. Mgbe ị na-arụ obere ogbe nke akụkụ, ot lathes nwere nnukwu arụmọrụ dị mma karịa CNClathe igwe. Ọtụtụ mgbe n'ozuzu-nzube lathes e esichara, na CNC lathes ka nọ na mmemme ogbo. N'ihi njirimara a, ndị nkịtị lathe ka nwere ahịa, kwesịrị ekwesị maka otu-ibe, obere ogbe mmepụta na mmezi noo.
Enwere ike kewaa lathes ndị a n'ime ọtụtụ lathes dị iche iche nke nkọwa dị iche iche, dịka LT6232 na LT6250, dabere na etiti etiti na etiti etiti. Na mgbakwunye na ịtụgharị ụdị ọrụ rotary niile, ha nwekwara ike gbanwee eriri dị iche iche, dị ka eriri metric, nke inch, eriri modulus, eriri diametric na eriri njedebe.
Iji meziwanye dayameta nhazi nke lathe a na-eme, a na - enweta lathe bed lathe (nke a na - akpọkwa sadulu lathe).
Isi aka ekpe nke oghere bed lathe dị n'ihu nke igbe ọkpọ isi na-ada ma nwee ike ịnabata akụkụ buru ibu. Ọdịdị lathe bụ isi abụọ dị elu, dị ala n’etiti, ọ dịkwa ka oche, ya mere a na-akpọ ya lathe lathe. Sadulu lathe adabara maka ịhazi akụkụ nwere nnukwu radial na obere akụkụ axial. Okwesiri igbanwe gburugburu nke dị n’èzí, oghere dị n’ime, ihu ihu, oghere na metrik, anụ ọhịa, modulu, eriri eri, na egwu na-agwụ ike. , na-agagharị na usoro ndị ọzọ, kachasị mma maka otu, ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Sadulu lathe nwere ike hazie ibu dayameta workpieces na sadulu uzo. Ntuziaka igwe akụrụngwa na-eme ka obi sie ike ma dị mma maka ịrụ ọrụ dị mfe na ntụkwasị obi. Igwe lathe nwere njirimara nke ike dị elu, nnukwu ọsọ, ike siri ike, nkenke dị elu na obere mkpọtụ.
A na-emepụta lathe CNC site na lathe, a na-agbakwunye usoro njikwa mmemme na igwe isi. Ihe omume a na-achịkwa ihe omume iji chịkwaa igwe iji rụọ ọrụ ahụ dịka usoro a kapịrị ọnụ, na-emecha usoro nke usoro ọrụ niile.
Dị ka otiti ndị a na-ejikarị eme ihe, a na-ejikwa lathes CNC iji mee ka akụkụ nke akụkụ dị iche iche gbanwee. N'ozuzu, ọ nwere ike na-akpaghị aka mezue machining nke elu cylindrical elu, na conical elu, * Tụkwasị na elu na eri, na nwekwara ike hazie ụfọdụ mgbagwoju adiana na-ebupụta, dị ka hyperboloids. A na-arụ otu ọrụ nke lathe na lathe nkịtị n'otu ụzọ ahụ. Iji meziwanye arụmọrụ nhazi, hydraulic lathes bụ ọtụtụ hydraulic, pneumatic na eletriki eletriki.
Ofdị nke lathe CNC bụ nke yiri nke lathe, ya bụ, ọ nwere akwa, akwa isi, onye na-ejide ngwa ọrụ, sistemụ nri sistemụ nri, sistemụ jụrụ ma na-ete mmanụ. Usoro nri nke CNC lathe dị na qualitatively dị iche na ot lathe. Otutu lathe nwere igbe nri na onye na-ebu mgbanwe. CNC lathe na-eji servo moto iji na-ebugharị slide na onye na-ejide ngwá ọrụ site na bọl bọl iji chọpụta mmegharị ndepụta. Ọdịdị nke usoro nri na-adị mfe.
A na-ewu ewu lathes CNC taa maka njikwa microcomputer. E nwere ngalaba abụọ nke lathes CNC ugbu a, otu n'ime ha bụ ngwa ọrụ igwe na-achịkwa microcomputer dị mfe, nke ọzọ bụ ngwaọrụ akụrụngwa na-achịkwa kọmputa. Mgbe ọ na-arụ ọrụ, CNC lathe na-arụ ọrụ dịka usoro ntinye nke usoro ntinye na ntinye nke ngụkọta ngụkọta na ngalaba mbanye. Ngwa akụrụngwa a na-achịkwa na-arụ ngụkọta oge dịka iwu ahụ si dị, na-ebute ngụkọta ngụkọta ahụ na ngwaọrụ draịva, na-achịkwa ngwaọrụ draịva (stepper moto) na etiti nke ngwaọrụ iji na-ebugharị usoro ntinye igwe, ma na-arụ ọrụ ọrụ igwe. ngwá ọrụ (ogologo na ogologo ụgbọ) iji ghọta mmegharị ọnwụ.
Akụkụ bụ isi nke lathe ahụ kwụ ọtọ bụ na isi axis yiri ihe arụ ọrụ ma yie ka ọ dina n'ala. Kwụ lathes ndị kwesịrị ekwesị maka nhazi Mkpa ọkụ workpieces na-abụghị nnukwu ke dayameta ma ogologo. Nke a bụ n'ihi na kwụpụta lathe na-esichara site Chuck na elu megide workpiece. Ọdịdị a na-ekpebi na ịdị arọ nke ihe nrụpụta enweghị ike ibu oke. Ogologo kachasị elu bụ kilogram 300, na lathe dị arọ nwere ike ibu 1 ton. Ogologo nhazi bụ isi uru nke lathe kwụ na-adabere na lathe vetikal.
The nhazi ogologo bụ 750mm, 1000mm, 2000mm, 3000mm, 4000mm ma ọ bụ ọbụna 8000mm, wdg
Akụkụ bụ isi nke lathe kwụ ọtọ bụ na spindle ahụ dị na tebụl na arụ ọrụ ahụ jikọtara ya na tebụl. Igwe kwụ ọtọ dị mma maka nhazi nnukwu ihe eji arụ ọrụ nwere nnukwu dayameta na obere ogologo. Nke a bụ n'ihi na na lathe vetikal, clamping na itinye n'ọnọdụ nke akụkụ dabara, yana rotary ndu n'etiti worktable na isi nwere mma amị ikike. Smoothdị ire ụtọ nke mmegharị n'oge ọrụ dị elu, ya mere ogo nhazi nke akụkụ ahụ dị elu, mana ogo nke akụkụ ndị a siri ike ịkwado mgbe etinyere ya na lathes na njedebe lathes.
Vetikal lathes nwere ike kewaa otu-kọlụm vetikal lathes na abụọ-kọlụm vetikal lathes. Single-kọlụm vetikal lathes n'ozuzu nwere vetikal ngwá ọrụ njide na a n'akụkụ ngwá ọrụ njide. Ndị na-ejide ya nwere igbe igbe dị iche iche nwere ike rụọ ọrụ n'otu n'otu ma ọ bụ n'otu oge maka ịgafe na ntanetị. Nnukwu larịị lathes na-enwekarị ikike abụọ. Maka ịdị mfe nke nhazi, ogidi lathe abụọ ahụ n'ozuzu ya nwere ihe njide ihe eji arụ ọrụ abụọ na onye na-ejide ihe akụrụngwa n'akụkụ. Nnukwu ihe mmado buru ibu nwere njide mma dị n'akụkụ nke ọ bụla n'ime ogidi abụọ ahụ.
Raildị okporo ígwè ahụ na-eme ka lathe na-esikwu ike ma dị mfe iji wepu ibe.
Crankshaft lathes, wheel lathes, mpịakọta lathes na ingot lathes, mbịne na-egwe ọka igwe ngwaọrụ, ọjà eriri lathes.
A Crankshaft lathe
A Crankshaft lathe bụ a pụrụ iche ụdị lathe eji igwe na njikọ mkpara olu na crank ogwe aka n'akụkụ nke esịtidem combustion engine na ikuku Compressor crankshaft.
CNC wheel lathe bụ ngwá ọrụ igwe pụrụ iche maka ịkpụzi na ịrụzi ụzọ abụọ nke igwe ụgbọ okporo ígwè. Iji meziwanye arụmọrụ na ọnụego ọnụahịa nke igwe akụrụngwa, e mepụtara usoro CNC maka ihe njide ejiri okpukpu abụọ nke wheel lathe ahụ, ma tụlere akụrụngwa akpaka, nhazi ngwa ọrụ yana ịkpụ ọrụ akụ na ụba nke usoro CNC. Ọ bụ ọnọdụ ọrụ igwe arụmọrụ zuru oke, ma kwadebe ya na sistemụ na-akpaghị aka, nke na-agbakọ ihe nkwụnye kachasị mma mgbe ọ nwụsịrị akụkụ ụkwụ nke wiil ahụ ka emezie.
Roll lathes bụ lathes ezubere ịhazi mpịakọta. A na-ejikarị mpịakọta ndị ahụ na igwe na-agagharị. Ọ bụ nnukwu nke ukwuu, arọ na arọ cylindrical udi na grooves na ya.
Igwe ntụgharị na igwe egweri
Na-agbanye naigwe igwe igwengwá ọrụ mejupụtara machining bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu machining Filiks na ụwa nke machining. Ọ bụ teknụzụ nrụpụta dị elu. Ngwakọta mejupụtara bụ mmejuputa usoro nrụpụta dị iche iche dị n’otu igwe. IgweMkpọpu ala, igwe ntụgharị. Ngwakọta mejupụtara bụ ihe a na-ejikarị eme ihe ma sie ike karị bụ nchikota nke ntụgharị na igwe. Ntugharị na-egwe ọka na-agwakọta igwe na-arụ ọrụ dịka nchikota nke CNC lathe na ebe a na-eme ihe.
Pipe eri lathe
Pipe eri lathe, nke a makwaara dị ka lathe eriri lathe, bụ lathe a na-ahụ anya nke e mere maka ịtụgharị eriri ọkpọkọ nnukwu dayameta. Ọ na atụmatụ a nnukwu onu dayameta nke isi aro (n'ozuzu 135mm ma ọ bụ karịa) na a Chuck n'ihu na azụ nke spindle igbe. Iji kwado nkedo na nhazi nke akwa akwa akwa ma ọ bụ ogwe osisi, a na-eji ngwaahịa a n'ọtụtụ ebe na nhazi nke igwe n'ichepụta, mmanụ ala, kemịkalụ, kol, nyocha ala, mmiri mmiri mepere emepe na ụlọ ọrụ drainage.
Cuttinggbọ ala mgbutu igwe a yitụrụ ụgbọ ala ịkpụ osisi n'ihi na a na-eji ya arụ ọrụ arụ ọrụ site na ịgbagharị ihe nrụpụta na kọntaktị na ngwaọrụ ahụ.
Agbanyeghị, ọdịiche dị n'etiti ha abụọ bukwara ibu:
Ọdịdị nke onye na-ejide mma dị iche. Carsgbọ ala osisi na-agbanwe agbanwe. Dịka ọmụmaatụ, iji lathe ịcha ihe iji bulie ite, ịkwaga ngwá ọrụ ịkpụzi ya nwere ike bụrụ ihe na-adịghị mma.
Ọdịdị nke workpiece dị iche. Ihe eji arụ ọrụ nke ụgbọ ala na-arụ ọrụ zuru oke, na njupụta na ịdị ike na-adị otu, yabụ enwere ike ibelata 3mm n'otu oge, enwere ike ịmegharị ngwa ọrụ ahụ. Ọ bụrụ na ejiri osisi a mee ihe n'ụzọ dị otú a, a ga-akpasu nkụ na ọbụnadị nkụ a ga-adọka. Hardgbọ ala osisi ịcha ụgbọ ala ka mma.
Ngwá ọrụ ntụgharị dị iche iche. Ọnụ mbelata nke ngwa ọrụ ntụgharị abụghị otu akụkụ.
Chuck ụdị CNC lathes
Igwe lathes ndị a enweghị ọdụdụ ma ha kwesịrị ekwesị maka diski na-atụgharị (gụnyere mkpụmkpụ mkpụmkpụ). Imirikiti ụzọ clamping bụ njikwa eletriki ma ọ bụ hydraulic, yana ngwongwo ahụ nwere ọtụtụ agba agba agba agba ma ọ bụ na-enweghị ike imenyụ (ya bụ, jaws dị nro)
A na-eji lathes ndị a nwere ọdụdụ nkịtị ma ọ bụ CNC tailstock. Ha kwesịrị ekwesị maka ịgbanye akụkụ dị ogologo na akụkụ diski nwere obere dayameta.
Na mgbakwunye, ọ nwere ike ịdị iche iche dịka nhazi ya si dị ziri ezi
E kewara lathe ahụ n'ime lathe izugbe, lathe ziri ezi na lathe dị elu. Nkenke na elu nkenke lathes na-adaberekarị na nkenke nkenke lathes. Site na imeziwanye geometric ziri ezi nke akụrụngwa, na-ebelata mmetụta nke ịma jijiji na isi mmalite ọkụ, na iji mgbatị arụmọrụ dị elu, igwe nwere oke nkenke igwe.
Ajuju ọ bụla biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Kpoo ndi otu anyi